CMS kachasị mma iji wuo ụlọ ahịa gị n'ịntanetị | ECommerce ozi ọma
elekọta mmadụ media
Nchịkọta, CRM na Nnukwu data
Ụzọ ịkwụ ụgwọ
Ndị ụlọ ahịa
CMS kachasị mma iji wuo ụlọ ahịa gị n'ịntanetị
Michael Gaton | | CMS na Teknụzụ
Magento bụ ezigbo nhọrọ CMS
Mgbe a bịara n'ịpụ na ịtọlite ​​azụmahịa azụmaahịa n'ịntanetị, otu n'ime nsogbu izizi na-ebilite bụ jiri ngwá ọrụ iji mepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ndụmọdụ anyị doro anya, hapụ echiche nke 100% nke mmepe ma họrọ maka bido n’ahịa CMS ma ozugbo a haziri ngwá ọrụ a, ọ ga-adị mkpa iji hazie ya kachasị na template na modulu dị iche iche iji nweta arụmọrụ ya zuru oke. N'ahịa enwere ọtụtụ nhọrọ, ebe a ka anyị ga-egosi gị ndị anyị chere kachasị mkpa.
5 E-Azụmahịa Drupal
6 Zen Cart
CMS siri ike nke na - enye gị ohere ịhazi ụlọ ahịa dị n'ịntanetị rue obere nkọwa. Ọ dị nnọọ mgbagwoju anya ịhazi ya iji malite ụlọ ahịa n'ịntanetị ị ga-achọ enyemaka nke ụlọ ọrụ mmepe ọkachamara na eCommerce.
O doro anya na ọ dị mfe iji karịa nke gara aga kamakwa obere zuru ezu. Enwere ike itinye ya naanị n'ime awa ole na ole ma anyị ga-enweworị ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. N'ezie, ịzụlite ụlọ ahịa na ọrụ ndị bụ isi ọ ga-adị mkpa iji gbasaa ọrụ ahụ na ọtụtụ modulu (ụfọdụ n'ime ha na-akwụ ụgwọ).
Ọ dịkwa nnọọ mfe iji na obere mgbalị ị ga-enwe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị gị njikere. Enweela ya obere oge na nso nso a ka ọ dị obere oge ochie. Ọ gaghị abụ nhọrọ a tụrụ aro ka ukwuu n'oge a.
Ee, ama ama WordPress blọgụ ikpo okwu bụkwa ezigbo ngwá ọrụ mgbe ị na-achịkwa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. E nwere toolkit a na-akpọ WooCommerce nke ahụ ga - enyere gị aka ịme ihe niile ịchọrọ ụlọ ahịa na - ahapụghị Ọnọdụ WordPress. N'ihi ọkwa mmepe na ewu ewu ya, ọ ga-abụ nhọrọ ị ga-atụle.
E-Azụmahịa Drupal bụ usoro nke modulu na-enye gị ohere ịnye Drupal ọrụ iji mepụta ụlọ ahịa n'ịntanetị. Ọ bụ kpam kpam n'efu na Open Source na mgbakwunye na irite uru na ike niile nke njikwa ọdịnaya nwere ahụmahụ dịka Drupal.
Zen Cart bụ ngwa ọrụ nke ndị nwe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ndị mmemme na ndị nrụpụta mepụtara. O doro anya ndị kasị ahịa gbakwasara niile niile ezie na na ọkwa nke nkwado na Nkuzi na Spanish e nwere ọtụtụ obere ihe ọmụma.
Na ahịa e nwere ihe ọzọ nhọrọ bụ zụta usoro mkpọ ụdị Shopify, ibe o Akpụkpọ ụkwụ ma ụdị nhọrọ ndị a chọrọ ọkwa dị elu nke itinye ego. Na kachasị ihe niile ị na - ejikọ azụmahịa gị na sistemụ nwegasịrị ma ọ bụrụ n’ọdịnihu ịchọrọ ịkwaga n’ụdị ikpo okwu ọzọ ọ ga - abụ usoro gbagwojuru anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » CMS kachasị mma iji wuo ụlọ ahịa gị n'ịntanetị
Mkpebi nke Report na Azụmahịa Egwuregwu na Spain (mbipụta 2013)
Nata ihe ohuru na eCommerce.
Ihe kpatara K
Onye na-eme ihe omimi